Otu esi edekọ oku vidiyo gị na otu | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi edekọ oku vidiyo nke otu gị
Ugbu a, anyị nwere ike ịme oku vidiyo kachasị ukwuu kemgbe ha dị. Ma ọ bụ maka ọrụ, na ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị yiri ya, oku vidiyo adịla ezigbo mkpa nye ọtụtụ mmadụ. The coronavirus na-eme ka ojiji nke oku vidiyo ndị a na-abawanye budata na nzukọ ọrụ ma ọ bụ ọbụna oge ndị ahụ nke ememme ụbọchị ọmụmụ nke enyi, onye ezinụlọ, wdg, nwere ike ịdị anyị mkpa na anyị chọrọ ịdekọ ha.
Ọfọn taa anyị ga-ahụ otu ị ga - esi mee ndekọ ụfọdụ oku vidiyo anyị na - eme na ngwa dị iche iche anyị nwere ma ọ bụ ọbụlagodi na FaceTime, ee, ị nwere ike ịdekọ oku vidiyo emere site na Skype, Mbugharị, WhatsApp ma ọ bụ ọbụlagodi site na Google Meet. Na nkenke, enwere ọtụtụ ọrụ dị ugbu a iji kpọọ oku vidiyo ndị a ihe ọ bụla ha bụ ma nwee ike ịdekọ ha.
1 Anyị ga-amalite site na ịdekọ ihe na iOS na FaceTime
2 Dekọọ oku vidiyo na Google Meet
3 Oku vidiyo e dere na Mbugharị
4 Dekọọ oku vidiyo nke Skype
Anyị ga-amalite site na ịdekọ ihe na iOS na FaceTime
Ee, Apple ogologo oge gara aga gbakwunyere nhọrọ na iOS ka ịdekọ ihuenyo mana ọrụ a anaghị ekwe ka ịdekọ ụda ahụ ka anyị wee nwee jiri Mac na mgbakwunye na iPhone ma ọ bụ iPad n'onwe ya site na eriri Lightning. Iji mee ndekọ nke a FaceTime anyị nanị nwere jikọọ USB anyị Mac na-eso nzọụkwụ:
Mepee ngwa QuickTime
Pịa na Njikwa wee na ndekọ ndekọ ọhụrụ
N'oge a anyị na-ahọrọ iPhone ma ọ bụ iPad na ngalaba Igwefoto
Ugbu a, anyị ga-pịa bọtịnụ ọbara ọbara na oku vidiyo ga-amalite ndekọ
Nke a na nhọrọ na-agbakwunye a Mac maka ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ha nwere ike ọbụna dekọọ oku site na WhatsApp ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ngwa anyị na-eji na anyị iOS ngwaọrụ na otu usoro a. Mac ga - eweghara ihe niile gụnyere olu nke oku vidiyo ahụ edere ya ozugbo anyị ga - echekwa obere vidiyo ma ọ bụ ya.
Dekọọ oku vidiyo na Google Meet
Ọrụ Google Meet na-enye ohere ka e dee oku vidiyo ndị a mana ọ bụghị n'efu. Ọrụ a ga-ejikọtara ya na ọrụ G Suite priselọ ọrụ y Sulọ ọrụ G Suite maka Mmụta Ya mere, ọ ga - ekwe omume na ọtụtụ n'ime unu nwere naanị nhọrọ nhọrọ na nke a agaghị arụ ọrụ maka gị.
Mana maka ndị nwere ọrụ akwụ ụgwọ, ha nwere ike ịdekọ oku ozugbo site na isoro usoro ndị a. Ọ dị mfe ma na nke a mgbe anyị mepere PC ma ọ bụ Mac anyị ga-amalite nnọkọ ahụ wee sonye oku vidiyo ma soro usoro ndị ahụ.
Anyị ga-pịa More menu, nke bụ isi ihe atọ kwụ ọtọ
Nhọrọ ịdekọ nzukọ ga-apụta
Pịa na ya ma anyị ga-amalite Ndekọ
Na njedebe anyị pịa Kwụsị ndekọ
Ozugbo Emechara faịlụ a ga-azọpụta na Google Drive n'ime folda nzute. N'okwu a na dịka anyị kwuru na mbido, ọ ga-ekwe omume na ọrụ a apụtaghị na nhọrọ nhọrọ gị ma nke a bụ n'ihi na onye nchịkwa onwe ya ejirila ndekọ ndekọ amachibidoro ma ọ bụ na anyị enweghị ọrụ a kpọmkwem na G Suite Enterprise na G Suite Enterprise maka Mmụta.
Oku vidiyo e dere na Mbugharị
Mbugharị bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị eji na nsogbu a Covid-19. Obi abụọ adịghị ya, nsogbu nsogbu nchedo ha nwere na mbido yiri ka edozila ma Mbugharị na-aga n'ihu na-eto eto na ndị ọrụ ka ụbọchị na-aga. N'okwu a, a na-echekwa ndekọ oku vidiyo oku ozugbo na kọmputa anyị, enweghị ọrụ igwe ojii anaghị akwụ ụgwọ ọ bụ ya ndekọ obodo na ihe niile free akaụntụ otú ị ga-aga site na igbe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndekọ gị nke a video oku na-echekwara na ígwé ojii.
Iji mee ndekọ na Mbugharị anyị ga-elekwa anya na nhọrọ nhọrọ nke ngwa ọrụ ma soro usoro ole na ole dị mfe. N'okwu a, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịgbalite ọrụ ahụ maka nke a anyị ga-agbanye na Ntọala akaụntụ banyere nhọrọ Ndekọ na mgbe e mesịrị anyị ga-pịa na nhọrọ Ndekọ mpaghara.
Ugbu a, anyị na-amalite oku vidiyo
Pịa na nhọrọ ọkụ
Anyị na-ahọrọ nhọrọ ndekọ mpaghara
Ozugbo anyị gwụchara anyị na-akwụsị ndekọ
Enwere ike ịchọta akwụkwọ echekwara na Mbugharị nchekwa n'ime PC gị ma ọ bụ Mac. Faịlụ a dị na Documents folda ma ị nwere ike ịhụ ndekọ na usoro Mp4 ma ọ bụ M4A site na ọkpụkpọ ọ bụla.
Dekọọ oku vidiyo nke Skype
N'ikpeazụ, otu n'ime ngwaọrụ ndị amaara ama maka ndị jirila vidiyo kpọọ tupu ọganihu nke ọrụ ndị a tara ahụhụ, Skype. N'okwu a, ngwa ama ahụ na-enyekwa anyị ohere ịme ndekọ nke oku vidiyo na anyị ga-pịa nhọrọ ahụMalite ndekọ»A hụrụ na Ntọala dị n'elu.
Ọ dị mfe na ngwa ngwa na Edekọtara echekwara ozugbo na akụkọ nkata anyị na oge 30, mgbe oge a gasịrị a na-ehichapụ ndekọ akpaghị aka. Ọ bụ otu ihe ahụ site na PC ma ọ bụ Mac, naanị anyị ga-pịa ntọala ma pịa mmalite ndekọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọnọdụ niile, ngwa ahụ n'onwe ha nwere nhọrọ dịnụ iji dekọọ oku vidiyo. Chọta nhọrọ maka ya dị mfe ma anaghị etinye mgbagwoju anya ma e wezụga na nke iOS na FaceTime nke choro Mac ka ịdekọ oku vidiyo.
Ọ dị mkpa ịsị na ọtụtụ ngwa na-egosi n'oge niile na a na-edekọ oku vidiyo, mana n'ihe gbasara iOS na FaceTime ọ pụtaghị. Ọ na-aga n'ekwughị na achọrọ nkwenye nzuzo nke ndị mmadụ iji mee ma ọ bụ kesaa ihe ndekọ ndị a nakwa na nke a na mba anyị nwere iwu na-egbochi iwu. Agaghị ekekọrịta data a na-enweghị nkwenye mbụ nke ndị niile sonyere na oku vidiyo ka ọ nwere ike ịkpa àgwà nsogbu iwu maka nsogbu nzuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Otu esi edekọ oku vidiyo nke otu gị
Nwere ike ibudata GTA 5 kpamkpam n'efu
Aghụghọ iji hazie Gmail ma nweta ọtụtụ ihe na ya